Umuntu ohlala EBHISHI: I-Burleigh Heads 1BDR w/ICHIBI LOKUBHUKUDA - I-Airbnb
Umuntu ohlala EBHISHI: I-Burleigh Heads 1BDR w/ICHIBI LOKUBHUKUDA
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Bruce
Ifulethi lethu elinekamelo lokulala eliyi-1 elinomklamo wangaphakathi osezingeni eliphezulu lizokwenza uzizwe sengathi usekhaya. Sisekude ne-Burleigh Heads beach, amathilomu nezindawo zokudlela. Jabulela iholide lakho lapha ngezindawo ze-resort ezifana nendawo yokubhukuda, i-tennis, inkundla, indawo yokuzivocavoca kanye nombhede wethu ontofontofo, usofa nekhishi elinakho konke okudingekayo. Ilungele izihambi ezihamba zodwa noma abantu abashadile.
Ifulethi elinekamelo lokulala elilodwa eliklanywe ngokukhethekile, elilungele umuntu ohamba yedwa noma abantu abashadile. Ifulethi lami linomoya futhi liseduze kakhulu nebhishi. Ikamelo lokulala linendawo evulekile, ligqamile futhi lihlanzekile. Inombhede omkhulu ontofontofo. Indawo yokuhlala iyindawo ekahle yokungcebeleka nokucabanga ngosuku lwakho, noma mhlawumbe uskene ibalazwe lomhlaba ngokucabangela isicelo sakho esilandelayo. Zilungiselele ukudla okumnandi ekhishini elinakho konke, futhi ukujabulele etafuleni elincane legumbi lokudlela. Zihlaziye ngemva kosuku olugcwele noluthandekayo egumbini lokugezela lapho uzothola khona ithawula elihlanzekile elinezinto ezimbalwa zokugeza. Ifulethi lethu litholakala ngaphakathi kwe-resort kanokusho lapho uzokwazi khona ukusebenzisa zonke izinsiza futhi.
- Ihlanzwe ngobuchwepheshe ngaphambi kwesivakashi ngasinye
- Amashidi namathawula ombhede wekhwalithi ephakeme
yehhotela - Ikhishi elinakho konke -
Umshini wokuwasha nomshini wokomisa ukuze uwusebenzise
4.63 · 80 okushiwo abanye
Ifulethi lami lise-Burleigh Heads, idolobha elinohlonze lase-Gold Coast.
I-Burleigh Heads, noma nje i-Burleigh kubantu bendawo, ihlezi njenge-coma epholile phakathi kwe-Surfers Planet ukuya enyakatho ne-Poolangatta eningizimu. Kuwuphawu oluhlaba umxhwele lokubhala ngase-Gold Coast futhi nakanjani indawo yokuyimisa okwesikhashana.
Ake siqale ngebhishi, ejabulela ukuthandwa kabili nalabo abathanda ukubhukuda emanzini akhe avikelekile nalabo abathanda ukutshuza emagagasini. Ngosuku lapho kungase kube khona ukunethezeka okuncane kuyo yonke indawo engasogwini, ungakwazi ukugembula i-dollar lakho elingezansi kunekona elivikelwe e-Burleigh lapho ungaphuthelwa khona. Ngisho nama-landlubber aqinile azojabulela le ndawo ye-Burleigh Heads National Park ezungeza isihloko njengesikhafu sekhanda esinemfashini, esinikeza ukubukeka kolwandle ngakwesokunxele kanye nemizila yokuhamba eminingi kanye nezilwane zasendle ukuze uzizwe.
I-Burleigh foreshore iyikhaya lezihlahla ze-pine ezinuka kamnandi zogu futhi kuleli paki kunezindawo eziningi lapho kuya khona ipikiniki noma i-barbecue. Lena futhi yindawo ekahle kakhulu yezimakethe zobuciko ezivamile, lapho ugijima khona futhi uzulazula khona ngasogwini kanye nolwandle olukhalaza isikhuthazo ngemuva. Indawo yokudlela engasolwandle ngokuphelele ikhona lapha lapho uzofunga khona ukuthi inhlanzi epulethini lakho igqume ngqo emanzini, futhi kukhona isiko le-burgeoning funé kulezi zingxenye. Abaklami abasha nabo baqala ukubeka izindawo zokuthenga futhi ukunethezeka lapha ngeke kudumaze.
Hamba uye e-West Burleigh lapho ipaki elikhulu lezimboni liqukethe khona ukuthenga okuhle kakhulu nendawo yokudlela emnandi. Mhlawumbe le koma yasogwini kufanele ibe uphawu oluhlaba umxhwele.
Indlela engcono kakhulu yokuxhumana nge-Airbnb. Ithimba lami lokusekela lizokujabulela ukuphendula yonke imibuzo yakho ngaphambi nangesikhathi sokuhlala kwakho.